Android နှင့် iPhone အတွက်အကောင်းဆုံး QR Code Scanning Apps ၁၂ ခု• Pageloot
Android နှင့် iPhone များအတွက်အကောင်းဆုံး 12 QR Code Scanning Apps များ
သင်ဤလိုက်တယ်လမ်းကြောင်းသစ်သတိထားမိကြပြီ? QR ကုဒ်များပြန်လာနေသည် သူတို့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကနေရာတိုင်းမှာပေါ်လာခဲ့တာပါ။ Uber JUMP ကဲ့သို့သောစက်ဘီးငှားရမ်းခြင်းအက်ပလီကေးရှင်းများမှ TikTok နှင့် IG ကဲ့သို့သောလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများအထိဤအချက်ကိုတွေ့နိုင်သည်။
အက်ပလီကေးရှင်းကိုသင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသလား။ သေချာတာကတော့စမတ်ဖုန်းတွေဟာ QR Code scan ကိုမူလကထောက်ပံ့ပေးသင့်တယ်။ ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးအချို့ကြည့်ရှုပါလိမ့်မည် QR Code Scanner apps များနှင့်သင်တ ဦး တည်းလိုအပ်ပါတယ်ရှိမရှိ။
QR ကုဒ်များ၏မူရင်းမှာထုတ်လုပ်မှုကာလအတွင်းမော်တော်ယာဉ်များကိုခြေရာခံရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ယနေ့ခေတ်တွင် QR ကုဒ်များသည်ပုံနှိပ်မီဒီယာကိုအွန်လိုင်းမီဒီယာများ (ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ YouTube ဗီဒီယိုများသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းထုတ်ကုန်ဘရိုရှာများ) နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းအတွက်ကြော်ငြာခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ QR ကုဒ်နံပါတ်များအတွက်လူကြိုက်များသောအခြားကဏ္ sector တစ်ခုမှာမိုဘိုင်းငွေပေးချေခြင်းဖြစ်သည်။
စမတ်ဖုန်းအတွက်အကောင်းဆုံး QR Code Scanner & Readers ဆိုတာဘာလဲ။
ဒီမှာငါတို့ 2020 အတွက်အကြိုက်ဆုံးစကင်နာ။ ၎င်းတို့ကိုဖြတ်သန်း။ သင်မည်သည့်အရာများအသုံးပြုလိုသည်နှင့်မှတ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါ။
QR Code Scanner ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများ စျေးနှုန်း ရရှိနိုင်ပါသည်
နေပြည်တော် + ဘားကုဒ်များအမျိုးအစားအားလုံးကိုဖတ်တယ်
+ ကုဒ်တင်ပို့နိုင် (လစာ)
- အတိအကျအခမဲ့မဟုတ်ပါ $0.99 Android, iOS & Windows
Pageloot QR စကင်နာ + 100% အခမဲ့
+ Safe Scan & စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုသမိုင်း
- အဘယ်သူမျှမဇာတိ app ကို (ကြည့်ပါ ပြသနာ) အခမဲ့ ပလက်ဖောင်းအားလုံး
Kaspersky QR Reader + iOS နှင့် Android အတွက် Native App
+ သင်၏ QR ကုဒ်စစ်ဆေးမှုမှတ်တမ်းကိုသိမ်းဆည်းသည်
- သိပ်မမြန်ဘူး အခမဲ့ Android & iOS
Scan အားဖြင့် QR Code Reader - app ကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်သည် $1.99 Android, iOS & Windows
Quickmark + မျိုးစုံဘားကုဒ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေး
+ Bulk စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုအင်္ဂါရပ်
- အတိအကျအခမဲ့မဟုတ်ပါ $1.99 Android & iOS
GammaPlay + အွန်လိုင်းစျေးနှုန်းများနှိုင်းယှဉ်ကူညီပေးသည်
+ inverted အရောင်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည်
- Android အတွက်သာရနိုင်သည် အခမဲ့ Android အတွက်သာ
ငါ -nigma + ဒါ့အပြင်ဘားကုဒ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေး
- ခေတ်မမီတော့သောဒီဇိုင်း၊ အက်ပလီကေးရှင်းဟောင်း အခမဲ့ Android, iOS & Windows
QR Droid + QR ကုဒ်များကိုလည်းဖန်တီးနိုင်သည်
- Android အတွက်သာ အခမဲ့ Android အတွက်သာ
Quick Scan + အသေးစိတ်သမိုင်းမှတ်တမ်း
- မှားယွင်းသောအမြန်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုလုပ်ဆောင်ချက် အခမဲ့ Android & iOS
ဘားကုဒ် + ဘားကုဒ်များကိုထောက်ပံ့သည်
- အတော်လေးစျေးကြီး $0.99 – $3.99 Android & iOS
မီဒီယာ + QR မီးစက်လည်းရှိတယ်
- Android ဗားရှင်းတွင်ဘားကုဒ်များမရှိပါ အခမဲ့ Android & iOS
QR Code Creator - ပျှမ်းမျှ app app နိမ့်သည်
- လှည့်စားခံသောစာရင်းပေးသွင်းခြင်း၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဤ app ကိုကုန်ကျစရိတ်အားလုံးဖြင့်ရှောင်ပါ။ သတိပြု! iOS အတွက်သာ
သို့သော်စောင့်ဆိုင်းပါ - ယနေ့ခေတ်တွင် QR Scanner အက်ပလီကေးရှင်းကိုတောင်လိုအပ်ပါသလား။
Android နှင့် iPhone ကဲ့သို့စမတ်ဖုန်းအများစုသည်မူလကင်မရာအက်ပလီကေးရှင်းတွင်ထည့်သွင်းထားသော QR Code စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့အသုံးပြုမှု QR စကင်နာ - ကင်မရာကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန် QR ကုဒ်ကိုညွှန်ပြပြီးသင်ပြီးပါပြီ။
iPhone အတွက် QR Codes များကိုမည်သို့စကင်လုပ်ရမည်နည်း
iOS 13 ကိုအသုံးပြုပြီး QR Code စကင်ဖတ်ခြင်းသည်အလွန်မြန်ပြီးဇာတိဖြစ်သည်။ စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုများသည်အလင်းနည်းသည့်အချိန်တွင်ပင်လျှင်မြန်တိကျသည်။ မည်သူမဆို iOS 11 အောက်တွင်သီးခြား app တစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည် စကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည်။
Android အတွက် QR Codes များကိုမည်သို့စကင်လုပ်ရမည်နည်း
အကယ်၍ သင်သည် Android 8 / Oreo သို့မဟုတ်အသစ်များကိုအသုံးပြုပါကကင်မရာအက်ပ်တွင် QR ကုဒ်များကိုစကင်ဖတ်နိုင်သည်။ ဘာမှမ OS7 အောက်တွင်သီးခြား application တစ်ခုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။
ဒီတစ်ခုမှာ BIG ပြProbleနာ
ဤအရာအားလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးမားသောစိုးရိမ်မှုမှာ QR Code scan မှတ်တမ်းအားသိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ။ ပျမ်းမျှဂျိုးကဒီအကြောင်းသိပ်မများဘူး။ ယခင်ကသင်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးခဲ့သော QR ကုဒ်များအားလုံးစာရင်းကိုဖတ်ရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ။
အကောင်းဆုံးကိုသာတောင်းဆိုသောစွမ်းအင်သုံးစွဲသူများအတွက်၎င်းအတွက်ဖြေရှင်းနည်းရှိသည်။ သင်တစ် ဦး QR Code ကိုစကင်နာ app ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ များစွာသောသူတို့ကိုငွေပေးချေသော်လည်းအချို့သောလျောက်ပတ်သောအခမဲ့အွန်လိုင်းစကင်နာများထွက်လာသည်။
QR ကုဒ်များအသုံးပြုခြင်းသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုလုပ်ရန်လိုင်စင်မရှိပါ။ စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုအတွက်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေပေးချေသင့်သနည်း။ ၂၀၂၀ တွင်ယနေ့ရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများကိုလေ့လာကြည့်ကြစို့။
အသေးစိတ်သုံးသပ်ချက် - အကောင်းဆုံး QR Code Scanner Apps ၅ ခု
NeoReader ကိုထိပ်ဆုံးနေရာမှာကျိန်းသေထားလိမ့်မယ်။ NeoMedia မှတီထွင်ထားသောဤစကင်နာ app သည်အလွန်ပေါ့ပါးသည် (4MB အရွယ်သာရှိသည်)
ဤအက်ပလီကေးရှင်း၏အကျိုးကျေးဇူးမှာ QR ကုဒ်နှစ်ခုလုံးကိုစစ်ဆေးသည် အဖြစ်ကောင်းစွာဘားကုဒ်များ။
ထို့အပြင် app ၏သမိုင်းကြောင်းကိုစာရင်းတစ်ခုအဖြစ်တင်ပို့နိုင်သည်။ ဒီအားနည်းချက်ကဒီအင်္ဂါရပ်ဟာအခမဲ့မဟုတ်တဲ့အတွက်သော့ဖွင့်ဖို့ $0.99 ကုန်ကျတယ်။ ကြော်ငြာများကိုဖယ်ရှားရန်သင်သည်နောက်ထပ် $0.99 ကိုပေးဆပ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်ကသင့်အားအင်္ဂါရပ်အားလုံးကို $1.98 တွင်ပြန်ပေးလိမ့်မည်။
စျေးနှုန်း: အခမဲ့လုနီးပါး (QR Code တင်ပို့မှုအတွက် $0.99 + ကြော်ငြာများကိုဖယ်ရှားရန် $0.99)
ရရှိနိုင်ပါသည်: iOS, Android & Windows
ကောင်းပြီ၊ အင်းဟုတ်တယ်၊ ငါတို့ကိုယ်တိုင်လည်းငါတို့ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်ကိုသွားမယ် (၁၀၀၁TP1T အခမဲ့၊ စကားမစပ်) ။ Pageloot နှင့်အခြားပြိုင်ဖက်များအားလုံး၏အဓိကခြားနားချက်မှာ ၁၀၀၁TP1T အခမဲ့ဖြစ်ပြီးပလက်ဖောင်းအားလုံးတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့မှာဒီဟာကတကယ်ကောင်းတဲ့ Safe Scan feature ရှိတယ် ၎င်းသည်ဝဘ်အက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင့်ဘရောက်ဇာမှတစ်ဆင့်သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည် ဒီမှာ.
သင်သည်သင်၏မူလမြင်ကွင်းတွင် bookmark ကိုထည့်ပြီးပြီဆိုလျှင်၎င်းနှင့်မူလအက်ပ်အကြားခြားနားချက်များစွာမရှိပါ။ သင်ကမူလအက်ပလီကေးရှင်းများကိုပိုပိုပြီးနှစ်သက်သည်ဆိုပါစို့။ ကျနော်တို့ကမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရှိသည်ဖို့ကြိုးစားနိုင်ဘူး။
စျေးနှုန်း: အစစ်အမှန်အတွက်လုံးဝအခမဲ့ (စစ်ဆေးပါ)
ရရှိနိုင်ပါသည်: ပလက်ဖောင်းအားလုံး၊ ဒါကဝဘ်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုပါ
၃။ Kaspersky QR Reader
ဒီတစ်ခုကအရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်။ စာဖတ်သည့်ဘားကုတ်ကဲ့သို့သောအပိုအင်္ဂါရပ်များမရှိပါ။ Kaspersky သည်လုံခြုံရေးဘုရင်ဖြစ်သည်ကိုလူတိုင်းသိသော်လည်းဤ app သည်ခြွင်းချက်မရှိပါ။ သူတို့ဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အချိတ်အဆက်တွေပါ ၀ င်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်။
ကျနော်တို့ရိုးသားပါလိမ့်မယ် - QR Code ၏စကင်ဖတ်စစ်ဆေးနှုန်းသည်အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါ သို့သော်၎င်းသည်အလုပ်ကိုလုပ်ရန်စီမံသည်။ သင်အနည်းငယ်နောက်ကျနေပြီးလုံခြုံမှုကိုအလေးထားလိုပါက၎င်းသည်အမှန်ပင်စစ်ဆေးသင့်သည်။
ရရှိနိုင်ပါသည်: Android & iOS
SimpleAct မှတီထွင်ထားသောဤ multifunctional barcode scanner သည်အလွန်ကောင်းသည်။ ၎င်းတွင်အမြောက်အမြားစကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်းကဲ့သို့သောထူးခြားသောစွမ်းဆောင်ချက်များစွာရှိသည်။ ၎င်းသည်နှောင့်ယှက်သောပြတင်းပေါက်များကြားတွင်မဖွင့်ဘဲ၊ Qr code မြောက်များစွာကိုတစ်ပြိုင်တည်းစစ်ဆေးနိုင်သည်။ အဆင်မပြေမှုကတော့ဒီ feature ကိုကုန်ကျစရိတ် $1.99 ကိုဖွင့်ဖို့ပါပဲ။
QuickMark ဗားရှင်းနှစ်မျိုးလုံးကို iOS နှင့် Android အတွက်ရနိုင်သည်။ Lite ကိုစတင်အသုံးပြုရန်အကြံပေးသောအခမဲ့ version ဖြစ်သည်။ သင်သည် app ကိုနှစ်သက်နေကြောင်းတွေ့ရှိပါကထိုကဲ့သို့သောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောစျေးနှုန်းများသည်စျေးနှုန်းသင့်တင့်မျှတကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပါသည်။
စျေးနှုန်း: Lite အတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည် (Continuous Scan အတွက် + $1.99)
ဤသည်သည်အမြန်ဆုံး QR နှင့်ဘားကုတ်စကင်နာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ကရှင်းလင်းသောရှင်းလင်းသော app ကိုတကယ်ကြိုက်တယ်။ ဒီဟာကစိတ်ကူးယဉ်စရာဘာမှမရှိဘူး - ဒါပေမယ့်ဟေး၊ ဒါကလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီးစူပါအမြန်ပဲ။ နောက်ထပ်တောင်းလို့မရဘူး
ဒီတစ်ခုရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကတော့ Android အတွက်သာဖြစ်တယ်။ iOS သုံးစွဲသူများသည်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့်အခြားနေရာများတွင်ရှာရမည်။
ရရှိနိုင်ပါသည်: Android အတွက်သာ
QR ကုဒ်များ၏အဓိကအကျိုးကျေးဇူးမှာ၎င်းတို့အားမည်သည့်အရာနှင့်မည်သည့်အရာအတွက်မဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ၎င်းတို့သည်ဖောက်သည်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အကျိုးရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသည် QR ကုဒ်တစ်ခုကို၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ် URL သို့ဖြန့်ဝေခြင်းဖြင့်ကြော်ငြာစရိတ်နှင့်ငွေကိုသက်သာစေသည်။
ဥပမာအားဖြင့်ဆိုသော်သင်ကစေ့စပ်ထားသူဖောက်သည်အရေအတွက်ပေါ် မူတည်၍ နေ့စဉ်အထူးလျှော့စျေးနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများကိုပေးသည့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုစတင်ချင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ပုံနှိပ်ထားသောကြော်ငြာတွင် QR ကုဒ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အသုံးပြုသူများကို QR ကုဒ်အားစကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့်ကင်ပိန်းဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားသောလူအရေအတွက်ကို အခြေခံ၍ ပုံမှန်မွမ်းမံထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
a ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့် အခမဲ့ဖြစ်သည် QR Code Scanner QR ကုဒ်များကိုဖတ်ရန်၎င်းသည်အနာဂတ်ရည်ညွှန်းမှုအတွက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုမှတ်တမ်းကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ QR ကုဒ်များကိုထူးခြားစေသည့်အရာမှာထိုကဲ့သို့သောကုဒ်များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်စားသုံးသူများအားအကန့်အသတ်မရှိသောသတင်းအချက်အလက်များကိုရယူရန်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုပေးနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် QR ကုဒ်များကိုအသုံးမပြုသေးပါကအလားအလာကောင်းများကိုပျောက်ဆုံးနေလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းလုပ်ထားသောအခမဲ့ရွေးချယ်မှုများနှင့်အချို့ကိုကြည့်ပါ ဖြစ်နိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများ သင်ကနေရရှိနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏စမတ်ဖုန်းတွင် QR Code Scanner ရှိပါသလား။
အများအားဖြင့်ယနေ့ခေတ်တွင် ဟုတ်တယ် QR Code ကိုရှာရန် (ဤဆောင်းပါးပါပုံတစ်ပုံကိုသုံးပါ) ကင်မရာအက်ပ်ဖြင့်စကင်ဖတ်ရန်ကြိုးစားပါ။
အလုပ်ဖြစ်တယ် - ကြီးတယ်! မရရှိလျှင်, ဤဆောင်းပါး၌အသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းများစာရင်းကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ လက်ရှိကင်မရာအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်အားနည်းချက်မှာစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုမှတ်တမ်းကိုသိမ်းဆည်းထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဒီတော့ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက် app ကိုသုံးချင်တယ်။
ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းနှင့် QR ကုဒ်များမည်သို့စကင်ဖတ်ရမည်နည်း။
ကင်မရာအက်ပ်ကိုဖွင့်ပါ နှင့် QR Code ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပါ။
၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါကသင်အက်ပ်တစ်ခုကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ စိုးရိမ်စရာမရှိ၊ အများစုမှာအခမဲ့ဖြစ်သည်။ အောက်ပါစကင်နာအက်ပလီကေးရှင်းများဖြစ်သော Pageloot, Kaspersky, Scan နှင့် Quickmark ။
ဒီမှာငါတို့ ထိပ်ဆုံး 12 စာရင်း စကင်နာ app များအတွက်:
6 ငါ -nigma
8 Scan အားဖြင့် QR Code Reader
မည်သည့် QR ကုဒ်နံပါတ်ကိုအကောင်းဆုံးဟုသင်ထင်သနည်း။ ကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ပါမှတ်ချက်နှင့်အတူသိပါစေ!
မှတ်ချက်တစ်ခုချန်ထားပါ ပြန်စာ ပယ်ဖျက်ပါ
အတွက် QR ကုဒ်များ စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်
QR ကုဒ် ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများ
အွန်လိုင်း QR Code Generator သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးထွားလာသည်
အတွက် QR ကုဒ်များ ထုပ်ပိုးထုတ်ကုန်များ